China Bone Ash ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Umlotha wethambo i-crystal emhlophe noma i-powder etholwe ngemuva kokuthi ibhlokhi lamathambo elikhishiwe selibalwe ngo-1300 The .Izinto zokwakha esilukhethayo zikhethwe ngokuqinile futhi siphishekela imikhiqizo esezingeni eliphakeme.
Isetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni i-high-grade bone porcelain embonini ye-ceramic, futhi ingasetshenziswa engilazini ye-opal, i-pigment stabilizer, i-agent ye-polishing, i-syrup clarifier, njll.
Ibanga A lomlotha wethambo licutshiwe lamalahle acutshungulwa abe yi-120 mesh, asetshenziswa embonini ye-ceramic kanye ne-metallurgical demould kanye nokuhlanzwa kwendle.
Umlotha wethambo itholakala emathanjeni ezilwane ngemuva kokubalwa emazingeni aphezulu okushisa. Ithambo eliluhlaza lifakwa ethangini elinengcindezi enkulu lengezwe ngamanzi afanelekile. Ithambo lishiswa ngo-150 ℃ amahora amabili, ukuze ithambo lehliselwe emathanjeni ngaphandle kwamaprotheni, bese loma.
Ibhlokhi lamathambo elomile lifakwa endaweni yokushisa ephezulu negesi yemvelo njengophethiloli futhi lishiswe ekushiseni okuphezulu okungu-1250 ℃ ngehora elilodwa noma ekushiseni okuphezulu kuka-1300 ℃ imizuzu engama-45. Ngalesi sikhathi, i-'N 'ibalwa ngokuphelele futhi wonke amabhaktheriya ashile ngokuphelele.
Amabhulokhi amathambo we-carbon ashisiwe achotshoziwe futhi ahlolwe ukucaciswa okuhlukile ngesikrini sokudlidliza, esivame ukufaka: i-60-100 mesh, 0-3mm, 2-8mm, njll.
Okomzimba futhi Amakhemikhali Izinto Izinga Lokuhlola Umphumela wokuhlola
5, Ukulahleka kokubalwa (Isisindo sokulahlekelwa)
13. Isikhathi esiqinisekisiwe sekhwalithi: Iminyaka emithathu, Kufanele igcinwe ezitsheni ezivaliwe ezimweni ezibandayo ezomile kude nezinto ezinuka kamnandi.
Langaphambilini I-Slow Speed ​​Manual Jelly Glue
Olandelayo: I-Bone Glue Bead